We.com.mm - တောင်ကိုရီးယားရဲ့အသက် (၃၀) ကျော် Handsome Men (၁၀) ယောက်
တောင်ကိုရီးယားရဲ့အသက် (၃၀) ကျော် Handsome Men (၁၀) ယောက်
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကိုရီးယားပရိသတ်တွေအတွက် အသက် (၃၀) ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ သရုပ်ဆောင် Handsome Men (၁၀) ယောက်ကို ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ အသက် (၃၀) ကျော် Handsome Men တွေက ဘယ်သူတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတာကို အဆုံးထိကြည့်လိုက်ကြရအောင်....။
အားလုံးပဲသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ Song Joong-ki ကတော့ မကြာခင်ကျရောက်မယ့် (၁၉) ရက်နေ့ကျရင် အသက် (၃၂) နှစ်ပြည့်မှာပါ။ အရပ်အမြင့်က ၅ ပေ ၁၀ လက်မဖြစ်ပြီး၊ အချစ်ရေးကတော့ အားလုံးပဲသိပြီးသားဆိုတော့ ပြောနေစရာတောင် မလိုတော့ပါဘူး။
2. Choi Jin-hyuk
Choi Jin-hyuk ကိုလည်း အားလုံးပဲသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ သူ့ရဲ့အသက်ကတော့ (၃၁) နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ အရပ်ကတော့ ၆ ပေ ၁ လက်မရှိပါတယ်။ အချစ်ရေးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Choi Jin-hyuk က single တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
3. Choi Si-won
ဟိုးအရင်ထဲက ကောင်မလေးတွေရဲ့အသည်းစွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ Si-won ကတော့ အသက် (၃၁) နှစ်ရှိနေပါပြီ။ အရပ်အမြင့်ကတော့ ၆ ပေ ရှိပါတယ်။ Si-won ရဲ့အချစ်ရေးကတော့ အခုထိ single တစ်ယောက်ပါပဲ။
အားလုံးသိတဲ့ Rain ကတော့ အသက် (၃၅) နှစ်ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူကတော့ နုပျိုနေဆဲပါပဲ။ အရပ်အမြင့်ကတော့ ၆ ပေ ၁ လက်မဖြစ်ပြီး၊ အချစ်ရေးကလည်း ပြောနေစရာမလိုအောင် အားလုံးလည်း သိပြီးသားပါ။
“K” ဆိုပြီး ကောင်မလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ Lee Joon-gi ကလည်း အသက် (၃၅) ရှိနေပါပြီ။ အရပ်အမြင့်ကတော့ ၅ ပေ ၁၀ လက်မဖြစ်ပြီး၊ အချစ်ရေးကတော့ RS နဲ့ပါတဲ့...။
နိုဝင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့ဆို၇င်တော့ Lee Dong-wook က အသက် (၃၆) နှစ်ပြည့်တော့မှာပါ။ အရပ်အမြင့်ကတော့ ၆ ပေ ဖြစ်ပြီး၊ အချစ်ရေးအနေနဲ့ကတော့ Single တစ်ယောက်ပါပဲ။
ဒီ (၁၀) ယောက်ထဲမှာတော့ Gong Yoo က အသက်အကြီးဆုံးပါပဲ။ သူ့ရဲ့အသက်ကတော့ (၃၈) နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ အရပ်ကတော့ ၆ ပေ ရှိပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာတော့ Gong Yoo ကလည်း single တစ်ယောက်ပါပဲ။
Park Hae-jin ကိုလည်း တော်တော်များများက သိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အသက်ကတော့ (၃၄) နှစ်ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုထိတော့ နုပျိုနေဆဲပါပဲ။ အရပ်အမြင့်ကတော့ ၆ ပေ ၁ လက်မဖြစ်ပြီး၊ အချစ်ရေးမှာတော့ သူကလည်း single ပါပဲတဲ့...။
Jo In-sung ဆိုတာကတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ဟိုးအရင်ထဲကရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ပါပဲ။ သူ့ရဲ့အသက်ကလည်း (၃၆) နှစ်ရှိနေပါပြီ။ အရပ်အမြင့်ကတော့ ၆ ပေ ၂ လက်မ ရှိပါတယ်။ Jo In-sung ရဲ့အချစ်ရေးကလည်း Single တစ်ယောက်ပါပဲ။
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hyun Bin ရဲ့အသက်ကတော့ (၃၄) နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ အရပ်အမြင့်ကတော့ ၆ ပေ ရှိပါတယ်။ အချစ်ရေးအနေနဲ့ကတော့ ချစ်သူရှိပါတယ်တဲ့...။
ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်တာမို့ ရှက်လည်း မရှက်ပါဘူးဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ဝေဖန်မှုများနေတဲ့ အကယ်ဒမီပေးပွဲကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှုံ့ချလိုက်တဲ့ အကယ်ဒမီ လွင်မိုး
Top. 25 နဲတင် ကျေနပ်ခဲ့ရပေမဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမူခွန်အားတွေရခဲ့တဲ့ အလှမယ်လေး ရွေအိမ်စည်